Momba anay - orinasa Qingdao New Asia Pacific Group Company
Qingdao New Asia Pacific Group Company dia naorina tamin'ny taona 2000 tany Qingdao tanàna tsara tarehy. Ny fifamoivoizana an-tanàna sy ny fitaterana an-dranomasina dia tena mety.
Ny orinasa eto aminay dia manana hery ara-teknika matanjaka sy ekipa teknika. Ny vokarintsika dia amidy any amin'ny firenena maro toa an'i Japon, Malaysia, Etazonia ary firenena maro any Eropa. Ny vokatra dia miaraka amin'ny kalitao sy ny vidiny mifaninana.
NAP dia nifanaraka tamin'ny soatoavin'ny orinasa ny mpanjifa voalohany, mpiara-miasa, tsy fivadihana, fitiavana ary fanoloran-tena. Ny ekipanay dia manome serivisy tsara ho an'ny mpanjifantsika.
Ny vokatra lehibe eto dia ny vokatra miaro toy ny fiarovan-tava, vovo-miaro, akanjo miaro, gown israeliana, gown fandidiana, kitapo fitsapana haingana (cassette fitsapana) sns. CE na FDA fanamarinana misy.
Ny ampinga tarehy dia ampiasaina amin'ny fiainana andavan'andro sy ny famokarana isan'andro. Azo ampiasaina amin'ny atrikasa, Biraon'ny asa, lakozia, lalana mando, fety lehibe, fihaonana sns.
Vokany fiarovana: fanoherana vovoka, fanoherana ny menaka avy any an-dakozia, fanoherana, fanoherana ny zavona, anti-kitapo, vatsy tsy fanafody, fa tsy fitsaboana.
* fanoherana ny rano, anti-menaka, fanoherana ny vovoka, fampiasana betsaka amin'ny sehatra isan-karazany. Solika tokana, lanja maivana, tsy fahita rano, kilasy ara-tsakafo.
Manohitra ny tsiranoka sy ny menaka ary ny menaka ny apôstôly.
Mazava, mety, vovoka-porofo, menaka-porofo, vovoka-porofo.
* Mora mora nefa azo ampiasaina, ary ny fanoherana Acid sy Alkali, izay azo ampiasaina amin'ny fizahana ny simika, fiarovana amin'ny indostria sy ny fambolena, fandokoana, ny fitaizana ary ny sisa.
Ny dingana manontolo sy ny akora misy akora dia mihatra amin'ny fenitra avo indrindra.
Izy io dia manana fampisehoana tsara anti-infiltration, fanisan-javatra avo lenta, fanoherana ny hamandoana, ny herin'ny rivotra sy ny fivezivezen'ny rivotra, izay ahafahana mahomby amin'ny fisorohana ny rano sy ny vovoka.
Gown isolation général
Ny akanjo goavam-be mitokana dia gaun tsy misy hidiny mba hanomezana sakana ho an'ny marary' ny tsiranoka ao amin'ny vatana sy ny tsiambaratelo. Ampiasaina indrindra amin'ny fikarakarana ny marary sy ny fisafoana ny fisorohana areti-mifindra any amin'ny toerana be olona. Izy io koa dia azo ampiasaina betsaka amin'ny fambolena, fiompiana biby, fiarovana ny tontolo iainana, ary ny faritra hafa.
Ny Gowns dia voahenjana kokoa amin'ny tratrany sy ny tanany ho an'ny efitra kely kokoa. Ny lamba malefaka sy voaroy dia manasongadina ny haitao ara-pitaovana ara-pitaovana avo lenta izay manome bar tahan-doha tsy mifanohitra. Mahatonga anao ho falifaly izany rehefa miasa, manampy anao hahatsapa fahatokisana sy mifehy.
Ny kalitao tsara sy ny vidiny mifaninana.
Fitsapana fanatanjahantena haingana / kasety fitsapana
Aretina Coronavirus 2019 (COVID-19) IgM / IgG Antibody Test dia haingam-pandeha haingana, mora takelaka ary mety tsara in vitro fiantohana amin'ny fitadiavana ny fahasamihafana misy ny otMika & IgG ny otrik'aretina COVID-19 ao amin'ny serum, ranon-tsina na santatry ny ra rehetra azo avy amin'ny marary voan'ny tsimokaretina COVID-19. Ny fitaovana dia natao hanampiana amin'ny famaritana ny fihanaky ny tsimokaretina farany na teo aloha teo amin'ny virus COVID-19 izay manenjika ny toe-javatra aorian'ny aretina avy amin'ny valan'aretina COVID-19. Ity kitapo fitsapana haingana ity dia amidy be.
Raha misy fanontaniana dia aza misalasala mifandray amin'ny olona mpivarotra. Email:Cynthia@napgroup.net Tongasoa eto ny fanontanianao!
Fiakanjo fiarovana, Akanjo fitsaboana fitsaboana, Water-Proof Apron, Fiakanjo fiarovana, Tariby endrika-vovoka mihetsiketsika, Rano Hdpe aprily amin'ny rano,